Arbaco, July 8 , 2020-Rabshadaha Ethiopia ka socda oo khatar ku ah Dimuqraadiyadda curdinka ah ee dalkaas – LaacibOnline
Arbaco, July 8 , 2020-Rabshadaha Ethiopia ka socda oo khatar ku ah Dimuqraadiyadda curdinka ah ee dalkaas
Arbaco, July 8, 2020 (HOL) – Raiisel wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo la gudoonsiiyey Abaal-marinta Nabadda ee Nobel ayaa u muuqda mid soo afjaraya kor u qaadista rajada isbedelka dimoqraadiyadda. Rajooyinkaas waxaa lumiyey jawaabtiisa culus ee uu ka qaatay mudaharaadyada ka soo horjeedda dawladda.Mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday dowladda oo soo billowday usbuucii hore, ka dib dilkii loo gaystay fanaanka caanka ah ee Haacaaluu Hundeessaa, ayaa dhawaan dhalisay isqabqabsi dowladeed. Illaa iyo hadda, inka badan 166 qof ayaa la dilay ku dhawaad 2,300 ayaa la xiray, oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha mucaaradka.
Itoobiya ayaa laga jaray internet-ka muddo dhan hal toddobaad iyada oo askar iyo booliis ay sii wadaan ilaalo roondeynta waddooyinka caasimadda Addis Ababa iyo meelaha kale ee ay ka socdaan rabshadaha.
Muuqaalka Ethiopia waa mid lagu xasuusto dhibaatooyinkaas ka jira waddammada uu hoggaamiyuhu ka yahay kaligii talis. Itoobiya waxaa dunida inteeda kale horey ugu ammaantey inay tusaale wanaagsan u tahay dimuqraadiyadda Afrika.
Raiisel wasaare Abiy Ahmed, oo xukunka la wareegay 2018, ayaa si deg deg ah nabad ku wada noolaatay dalka ay deriska yihiin ee Ereteriya, kaas oo soo afjaray dagaal dheer oo sano badan socday.
Wuxuu kaloo fuliyay tallaabooyin loogu talagalay soo celinta xorriyadda madaniga ah sida xorriyadda saxaafadda iyo ra’yiga wuxuuna ballanqaaday Itoobiya oo dimuqraadi ah oo cusub.
Sanadkii 2019-kii waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta Nabadda ee Nobel oo lagu aqoonsaday dadaalkiisa. Laakiin, marka la eego xaaladda hadda jira, miyuu ahaa mid dagdag ah go’aankii ay gaareen guddiga Nobel?
← John Terry responds on Instagram to what Kurt Zouma did during Chelsea’s win over Crystal Palace
Google’s Loon launches service in Kenya →
Axad, Sept 20, 2020-Cabdiraxmaan Cabdishakuur “Soomaaliya waxaa laga badbaadiyay dhibaato dhici laheyd”